चाणक्य नीतिअनुसार यी युवतीसँग कहिल्यै नगर्नुस् विहे, नत्र जीवन बर्बाद हुनेछ ! - inaruwaonline.com
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ २१, २०७२ समय: १६:१०:३०
विवाहलाई सात जूनीसम्मको सम्बन्ध मानिन्छ ।उसो त विहे भनेको एक आपसमा समाहित हुने र जीवनभरी एकसाथ रहने बन्धन हो । यसलाई जीवनकै सबैभन्दा पवित्र बन्धन पनि मानिन्छ । यसकारण हामीले यसमा हरेक तरिकाबाट सावधानी अपनाउनुपर्छ । विवाहको बेला गरिएको सानो गल्तिले अथवा असावधानीले तपाईलाई जीवनभर दुःख र पीडा दिनसक्छ ।
धर्मनीति र कूटनीतिको पाठ पढाउने आचार्य चाणक्य भन्दथे- हामीले विवाहको बेला स्त्री(महिला)को सुन्दरतामा मोहित(लठ्ठ) हुनुको सट्टा उनलाई उच्च कुलसँग जोड्नुपर्छ । यदि महिला उच्च कुलकी हुन भने तपाईको घरलाई वैभव(लक्ष्मी) र खुशीले भरिदिनेछिन् ।
जान्नुस् आचार्य चाणक्यले जीवनमा कुन कुराको ख्याल राख्नुपर्ने वा त्यसलाई मान्नुपर्ने सल्लाह दिएका छन् ।
विहे गर्ने बेला स्त्रीको कुल हेर्नुस्, सुन्दरता होइन्
हाम्रो समाजमा अधिकांश युवाहरु युवतीको सुन्दरतामा लठ्ठै हुन्छन्, उनीहरु युवतीको कुल हेर्नबारेमा इच्छा नै देखाउँदैनन् । तर, आचार्य चाणक्य भन्दथे– अधिकांश यस्तो हुन्छ कि केही सुन्दर स्त्रीहरु पनि विवाहका लागि योग्य हुँदैनन्, यसकारण हामीले सधै सावधानी अपनाउनुपर्छ । आचार्यका अनुसार समझदार मनुष्य त्यो हो जो उच्चकुल अर्थात संस्कारी परिवारमा जन्मिएकी कन्यासँग विवाह गर्ने निर्णय लिन्छ । चाणक्य मान्यता अनुसार यदि यस्ता परिवारकी कन्या कम सुन्दर भएपनि उनीसँग विवाह गर्नुपर्छ । सुन्दर कन्या यदि अधार्मिक चरित्र वाली हुन भने उनी विवाहपछि परिवारलाई बर्बाद पार्छिन् । अर्थात परिवारमा विवाद बढ्ने, सम्बन्ध विच्छेद हुने सम्भावना रहन्छ ।
सच्चा मित्रसँग राख्नुस् सम्बन्ध
आचार्य भन्दथे- हामीले आफ्नो सच्चा मित्रसँग नजिक हुनुपर्छ, सम्बन्ध राख्नुपर्छ, किनकि अप्ठेरोमा सच्चा मित्रले नै परेशानिबाट बचाउन सक्छ र कठिन समयमा मद्दत गर्छ । उनको भनाई थियो– जून व्यक्तिमा आफ्नो परिवारको पालन पोषण गर्ने योग्यता–क्षमता छैन्, जो व्यक्ति आफूले गल्ति गर्दा पनि कसैसँग डराउँदैन्, जो व्यक्तिमा लाजशरम छैन्, जसमा उदारताको भावना छैन्, जो त्यागशील छैन्, त्यो मित्रताको योग्य(लायक) हुँदैन् । यसकारण हामीले मित्र बनाउने समयमा यी खास कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
आचार्यका अनुसार हामीले कहाँ बस्नुपर्छ ?
हामीले कुन नगर, क्षेत्र वा दरबारमा बस्नुपर्छ ? यसको बारेमा पनि आचार्यले खास कुरा बताएका छन् । उनको भनाई थियो– जून स्थानमा कुनै खास बस्तु छैन् भने त्यहाँ हामीले बस्नुहुँदैन् । आचार्य मान्दथे कि जून स्थानमा कुनै धनी छैन् त्यहाँ बस्नुहुँदैन् । यदि तपाईको नजिक कुनै धनी व्यक्ति बस्छ भने त्यहाँ आसपास बस्ने मानिसलाई पनि रोजगार पाउने सम्भावना हुन्छ । यस्तै यदि तपाईको नगरमा कुनै ज्ञानी(पढेलेखेको, विद्धवान) व्यक्ति बस्छ भने ती व्यक्तिबाट तपाईलाई धर्म लाभ प्राप्त हुनसक्छ । अर्थात हाम्रो मन निष्पाप रहन सक्छ । एजेन्सीको सहयोगमा